Thu, Jul 2, 2020 at 9:08pm
तेहरान, १८ पुस अमेरिकी हवाइ आक्रमणमा इरानी सैन्य कमाण्डर मारिएपछि इरानमा अमेरिका विरोधी विशाल प्रदर्शन भएको छ । अमेरिकी अधिकारीहरुले अमेरिकालाई चेतावनी दिँदै अभिव्यक्ति दिएका छन् । अमेरिकी सेनाले भने उक्त हमला 'अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्देशन'मा भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । शुक्रबार बिहानै इरानी सैनिक विशेष फौजका कमाण्डर कुसेम सोलेमानी अमेरिकी हवाइ हमलामा मारिएका थिए । उक्त घटनापछि दशौं हजार नागरिकले सडकमा उत्रिएर 'अमेरिकी..
अमेरिकी आक्रमणको बदला लिने इरानको कडा चेतावनी
काठमाडौं, १८ पुस अमेरिकी आक्रमणमा इरानको कुद्स सेनाका प्रमुख जनरल मारिएपछि इरानले तीन दिनको राष्ट्रिय शोक घोषणा गरेको छ । शोकको घोषणा गर्दै इरानका सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्ला अली खमानीले आक्रमणका दोषीमाथि कडा बदला लिने चेतावनी दिएका छन् । शुक्रवार इराकको बग्दादमा इरानी फौजको विशेष दस्ता क्विडका प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी मारिएपछि खामेनीको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो । इरानका विदेशमन्त्री जावद जरिफले यो घटनालाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय..
अमेरिकी आक्रमणमा मारिए इरानका कुद्स सेनाका प्रमुख
एजेन्सी, १८ पुस । इरानको कुद्स सेनाका प्रमुख जनरल कासिम सोलेमानी बगदाद अमेरिकी आक्रमणमा मारिएका छन् । उक्त अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको आक्रमणको जिम्मेवारी अमेरिकाले लिएको छ । पछिल्लो समय आएका समाचारअनुसार यो आक्रमण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पकै निर्देशनमा भएको थियो । यही आक्रमणमा कताइब हिजबुल्लाहका कमान्डर अबु महदी अल मुहान्दिस पनि मारिएका छन् । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,..
इराकस्थित अमेरिकी दूतावासमा हमला, इरानले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने ट्रम्पकाे चेतावनी
बगदाद, १६ पुस । इराकको एउटा मिलिट्यान्ट समूहले बगदादस्थित अमेरिकी दूतावासमा आक्रमण गरेको छ । अमेरिकाद्वारा हालै गरिएको हवाइ आक्रमणबाट आक्रोशित इरान समर्थितहरूले मंगलबार अमेरिकी दूतावासमा आक्रमण गरेको हाे । अमेरिकी सेनाले भीडलाई तितरबितर पार्न अश्रु ग्यासको प्रयोग गरेको थियो । अमेरिकी दूतावास निकै सुरक्षित मानिने ग्रिन जोनमा रहे पनि त्यहाँ आक्रमण भएको हो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सो आक्रमणमा इरान जिम्मेवार भएको..
अमेरिका र चीनबीच पहिलो चरणको व्यापार सम्झौता वासिङ्टनमा हुने
वासिङ्टन, १५ पुस अमेरिका र चीनबीच लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरिएको व्यापार सम्झौता अमेरिकाको वासिङ्टनमा हुनेभएको छ । अमेरिका–चीनबीच हुने भनिएको ‘पहिलो चरण’को व्यापार वार्तामा अर्को महिनाको मध्यतिर वासिङ्टनमा हस्ताक्षर गरिने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मङ्गलबार बताउनुभएको हो । “हाम्रो चीनसँग हुने पहिलो चरणको बृहत् व्यापार सम्झौतामा मैले जनअरी १५ मा हस्ताक्षर गर्नेछु, राष्ट्रपति ट्रम्पले ट्विटर सन्देशमा लेख्नुभएको छ । “चिनियाँ उच्च प्रतिनिधिमण्डलको उपस्थिति रहने..
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र माेदिकाे आवासीय परिसरमा आगलागी
नया दिल्ली, १५ पुस । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लोक कल्याण मार्गस्थित आवासीय परिसरमा आगलागी भएको छ । सोमबार साँझ साँझ ७ः२५ बजे आगलागी भएकोमा त्यसलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिइएको थियो । भारतको अग्निशमन विभागका अनुसार आगो नियन्त्रणमा लिनका लागि दमकल समयमै पुगेका कारण क्षति हुन नपाएको जनाइएको छ । अधिकारीहरुका अनुसार आगो सामान्य भएकोले समयमै नियन्त्रण गर्न सकिएको थियो । पछि प्रधानमन्त्री मोदीको..
अष्ट्रेलियामा आगलागी आतंक बढेपछि ४ हजार मानिस समुद्री किनारामा
अष्ट्रेलिया, १५ पुस । अष्ट्रेलियाको भिक्टोरियाको माल्लाकूटा क्षेत्रमा भएकाे आगलागी फैलिदै गएकाे छ । स्थानीय बासिन्दाका अनुसार सो क्षेत्रमा आगलागी फैलिएर घर भएको स्थानतिर आउने क्रम मंगलबार बिहानैदेखि बढेको हाे । साे क्षेत्रमा लागेकाे आगाे फैलिएपछि हजारौं मानिसहरु पानी भएको स्थानतर्फ हिंडेका छन्। स्थानीय बासिन्दाले पोस्ट गरेको तस्विरमा आकाश पुरै रातो देखिनुका साथै धुवाँ र पुरै अँध्यारो अवस्था देखिन्छ । सिडनी र मेलबर्नका केही ख्यातिप्राप्त होलिडे स्पटहरु..
भागेर लेबनान पुगे भ्रष्टाचारकाे अभियोग लागेका निसानका पूर्व प्रमुख
काठमाडौं, १५ पुस । भ्रष्टाचारकाे अभियोग लागेका निसानका पूर्व प्रमुख कार्लोस गोन्स जापानबाट भागेर लेबनान पुगेका छन् । सञ्चारमाध्यमहरुमा आएका समाचार अनुसार भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका कार्लोस लेबनानको बेरुत पुगेका हुन् । एक लेबनानी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था एएफपीले कार्लोस बेरुत पुगेको तर उनले कसरी जापान छोडे भन्ने थाहा नभएको उल्लेख गरेको छ । आर्थिक अनियमितताको अभियोगमा कार्लोस सन् २०१८ मा पक्राउ परेका थिए..
आहाखबर विशेष : यी हुन् सन् २०१९ का चर्चित १९ घटनाहरु
काठमाडौँ, १३ पुस वर्ष सन् २०१९ मा पनि राजनीतिक घटनाक्रमहरु नै बढी चर्चामा रहे भने केही ठूला दुःखद घटनाले विश्वलाई स्तब्ध बनायो । विशेष गरेर अमेरिका र बेलायतको राजनीतिले विश्वका सञ्चारमाध्यमहरु ओगटे भने अन्य देशका पनि केही घटनाहरुले स्थान पाए । सन् २०१९ का चर्चित १९ घटनालाई यहाँ छोटकरीमा स्मरण गरिएको छ । १. भेनेजुएलाको पक्ष विपक्षमा विश्व विभाजित सन् २०१९ को सुरुवात..
प्रहरीले कांग्रेसकी महासचिव प्रियंका गान्धीकाे गर्धनमा समातेपछि
नयाँ दिल्ली, १३ पुस । उत्तर प्रदेश प्रहरीले भारतीय कांग्रेसकी महासचिव प्रियंका गान्धीकाे गर्धनमा समातेकाे छ । नागरिकता संशोधन कानूनको विरोध गर्दा गिरफ्तारीमा परेका अवकाशप्राप्त प्रहरीको घर जाने क्रममा आफुमाथि हातपात भएको प्रियंकाले दावी गरेकी छिन्। ७६ बर्षीय पूर्व प्रहरी अधिकारी एसआर दारापुरीको घर जाने क्रममा प्रियंका एक स्कुटरमा बसेकी थिइन्। उत्तर प्रदेश प्रहरीले भने प्रियंकामाथि कुनै आक्रमण या दुव्र्यवहार नभएको बताएको छ। निर्धारितभन्दा फरक बाटोबाट..
मस्को, १२ पुस रुसले ध्वनिभन्दा २० गुणा छिटो उड्ने ‘हाइपरसोनिक अभानगार्ड’ क्षेप्यास्त्रहरू जडान गरेको रूसी रक्षा मन्त्रालयले बताएको छ । ती क्षेप्यास्त्रहरू जडान गरिएको स्थानबारे बताइएको छैन तर अधिकारीहरूले यसअघि नै ती पश्चिमी रुसको युराल पर्वत क्षेत्र वरपर राखिने सङ्केत गरेका थिए । रूसी अधिकारीले क्षेप्यास्त्रले सहजै दिशा परिवर्तन गर्न सक्नेछ र यसको परीक्षणका क्रममा यसको गति प्रतिघण्टा ३३ हजार किलोमिटर पुगेको..
संसदमा हिंसात्मक क्रियाकलाप गरेपछि विपक्षी नेता पक्राउ
काठमाडौँ, १२ पुस संसदमा नाटकीय र हिंसात्मक क्रियाकलाप गरेको भन्दै मोन्टेनेग्रोका विपक्षी दलका नेतालाई शुक्रबार पक्राउ गरिएको छ । धार्मिक स्वतन्त्रता सम्वन्धी विवादास्पद कानुन पारित भएपछि उनले संसदभित्र विरोध तथा प्रदर्शन गरेका थिए । नयाँ कानुनमा समावेश गरिएको चर्च सम्वन्धी विषयलाई लिएर मोन्टेनेग्रोका सरकार पक्ष र विपक्षका बीचमा विवाद रहेको छ । संसदमा बिहीबार विवाद भएकोमा राती अबेरसम्म पनि त्यो साम्य भएको थिएन ।..
अमेरिकामा हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा ६ जनाको मृत्यु
हवाई, १२ पुस । अमेरिकको हवाई राज्यमा हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा ६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । शुक्रबार हवाई राज्यको नपाली समुन्द्री तटमा भ्रमणका लागि गएको हेलिकप्टर हावाहुरीका कारण दुर्घटनामा परेको थियो। हावाहुरी चलेपछि हेलिकप्टर अवतरण गर्ने प्रयास भएको थियो । अवतरणको प्रयास क्रममा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको जनाइएको छ । ..
मृत्युदण्डको फैसलाविरुद्ध मुशर्रफले दिए पुनरावेदन
इस्लामावाद, पाकिस्तान, ११ पुस पाकिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफले विशेष अदालतको फैसलाविरूद्ध शुक्रबार लाहोर उच्च अदालतमा मुद्दा पुनरालोकनका लागि निवेदन दर्ता गर्नुभएको छ । उहाँलाई विशेष अदालतले यही डिसेम्बर १९ मा पाकिस्तानको संविधानको धारा ६ अनुसार देशद्रोहको अभियोगमा मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको थियो । पूर्व सैनिक शासक मुशर्रफले आफूमाथि प्रतिशोधका कारण उक्त फैसला आएको धारणा आफ्ना वकीलमार्फत् यस पहिले नै राख्नुभएको थियो । पाकिस्तानी..
यमनको अलराक्वमा एक महिनामा तेस्रो आक्रमण, १७ सर्वसाधारणको मृत्यु
साना, यमन, १० पुस यमनको उत्तरी क्षेत्रको गभर्नरको कार्यालय रहेको सादा सहरमा भएका आक्रमणमा परी कम्तीमा १७ व्यक्तिको मृत्यु भएको संयुक्त राष्ट्रसंघले बिहीबार जनाएको छ । यो सहरमा करिब एक महिनाको अन्तरालमा भएका आक्रमणमा कम्तीमा ३७ जनाको मृत्यु भएको छ । यमनमा पछिल्ला केही महिना यता तुलनात्मक रूपमा शान्त रहने गरेको भएपनि सादामा एक महिनाको अन्तरालमा तीन आक्रमण भएका छन् । इरानसँग निकट..
२४ घण्टामा १ सय भन्दा बढी तालिवान लडाकूको मृत्यु
काबुल, अफगानिस्तान, ८ पुस अफगानिस्तानमा सेनाले देशभर चलाएको सुरक्षा कारबाहीमा परी १०० भन्दा बढी तालिवान लडाकूको मृत्यु भएको सरकारी अधिकारीले बताएका छन् । कारबाहीबारे तालिवान समूहबाट कुनै प्रतिक्रिया आइसकेको छैन । सुरक्षाकर्मीले देशका विभिन्न १५ राज्यमा १८ स्थानमा विद्रोहीविरूद्ध कारबाही चलाएको सेनाले बताएको छ । उफगानिस्तानको रक्षा मन्त्रालयद्वारा मङ्गलबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विगत २४ घण्टामा देशका विभिन्न १५ राज्यमा १८ स्थानमा विद्रोहीविरूद्ध..
कम्पनीमा पुनः आत्मविश्वास स्थापित गर्ने उद्देश्यसहित बोइङ्गले बर्खास्त गर्‍यो प्रमुख कार्यकारी
काठमाडौँ, ८ पुस अमेरिकी विमान निर्माता कम्पनी बोइङ्गका ७३७ म्याक्स संस्करणका दुई विमान लगातार दुर्घटनामा परेपछि कम्पनी समस्यामा छ । प्रमुख कार्यकारी डेनिस मुलिनबर्गलाई बर्खास्त गरेको छ। कम्पनीमा पुनः आत्मविश्वास स्थापित गर्ने उद्देश्यसहित बोइङ्गले डेनिसलाई बर्खास्त गरेको हो । बोइङ्गका ७३७ म्याक्स संस्करणका दुई विमान लगातार दुर्घटनामा परेपछि कम्पनी समस्यामा छ । ३४० जना भन्दा बढीको ज्यान गएका ती दुर्घटनापछि बोइङ्गमागि यात्रुको सुरक्षा..
अफगानिस्तानको निर्वाचनको प्रारम्भिक परिणाम राष्ट्रपतिद्धारा स्वीकार
काठमाडौँ, ७ पुस अफगानिस्तानका राष्ट्रपति असरफ गनीले अफगानिस्तानमा हालै भएको निर्वाचनको प्रारम्भिक परिणाम स्वीकार गर्नुभएको बताइएको छ । यहाँ हालै सम्पन्न भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनको आइतबार सार्वजनिक भएको प्रारम्भिक परिणाम राष्ट्रपति असरफ गनीले स्वागत गर्नुभएको समाचारमा जनाइएको छ । जनाइएअनुसार आइतबार सार्वजनिक भएको उक्त निर्वाचनको प्रारम्भिक परिणामलाई उहाँले निष्पक्ष भन्नुभएको छ । साथै उहाँले सो निर्वाचनका लागि अफगानिस्तानको निर्वाचन आयोगलाई धन्यवाद पनि दिनुभएको काबुलबाट प्राप्त..
एजेन्सी, पुस ७ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले गत जुलाइमा आफ्ना युक्रेनी समकक्षीसँग टेलिफोन वार्ता गरेको मात्र ९१ मिनेटपछि ह्वाइट हाउसले युक्रेनलाई दिने सहायता रोक्का गर्न भनेको एउटा इमेलबाट खुलासा भएको छ। टेलिफोन वार्तामा ट्रम्पले आफ्ना डेमोक्र्याटिक प्रतिद्वन्द्वी जो बाइडेनविरुद्ध अनुसन्धान गर्न युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई आग्रह गरेका थिए। डोमोक्र्याटहरू भन्छन्: राष्ट्रपति ट्रम्पले पदको दुरुपयोग गरेको कुरा त्यसले देखाउँछ। त्यो महत्त्वपूर्ण टेलिफोन कुराकानी शक्तिको दुरुपयोगमा..
क्रोएसियामा नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि मतदान
जाग्रेभ, ६ पुस क्रोएसियामा आगामी पाँच वर्षका लागि नयाँ राष्ट्रपति चयन गर्न आइतबार मतदान भएको छ । स्थानीय समयअनुसार बिहान ७ बजेदेखि शुरु भएको मतदान बेलुका ७ बजेसम्म चल्ने अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । नयाँ राष्ट्रपति बन्नका लागि ११ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । विद्युतीय माध्यमबाट निर्वाचन भएकाले बेलुका ७ बजे मतदान सकिएपछि ८ बजे नै नतिजा आउने अपेक्षा गरिएको छ । निर्वाचनका..
काठमाडौँ, ६ पुस अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध अमेरिकी संसदको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभले लगाएको महाभियोग एक पक्षपातपूर्ण काम भएकोे सिनेटका एकजना रिपब्लिकन नेताले बताउनुभएको छ । सिनेटमा रिपब्लिकनतर्फका नेता मिच मक्कनलले सो कुरा बताउनुभएको हो । उहाँले डेमोक्र्याटहरुको पहलमा आएको यो महाभियोगको प्रस्ताव अमेरिकाको राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा धेरै हतार गरेर ल्याइएको प्रस्ताव भन्नुभएको छ । साथै उहाँले यस कार्यलाई विपक्षीहरुले गरेको एउटा..
डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्धकाे महाअभियोग प्रस्ताव तल्लाे सदनबाट पारित, पदबाट हट्लान् ?
एजेन्सी, ४ पुस । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पारित भएको छ । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमा अमेरिकी संसदको तल्लो सदन कंग्रेसमा बुधबार बहस र मतदान भएको छ । स्थानीय समयअनुसार बुधबार साँझ (नेपाली समयअनुसार अहिले बिहान) मतदान हुँदा संसदको तल्लो सदन कंग्रेसले प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको छ । अमेरिकी तल्लो सदनमा विपक्षी डेमोक्र्याट्सको बहुमत भएकोले..
रूसद्वारा सन् २०१९ मा १३ अर्ब डलरको हतियार आपूर्ति
मस्को, ३० मङ्सिर रूसले सन् २०१९ मा १३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको हतियार विश्वका विभिन्न मुलुकमा आपूर्ति गरेको राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सोमबार बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार रूसले हतियार आपूर्तिबाट गत बर्षको तुलनामा यस बर्ष दुई अर्ब अमेरिकी डलर बढी आम्दानी गरेको छ । “‘अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र रूसमाथिको कडा प्रतिबन्ध’ का बाबजुद विश्वमा रूसको हतियार बजार फस्टाएको छ,” पुटिनले विदेशी मुलुकहरूसँगको रूसी..
अमेरिकालाई टर्कीले दियो हवाइ आधार बन्द गरिदिने चेतावनी
काठमाडौँ, ३० मङ्सिर आफूहरुमाथि लगाएको प्रतिबन्धमा टर्कीले अमेरिकालेप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । टर्कीका राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोगानले यसबारे बोल्दै भन्यो ,‘ अमेरिकाले टर्कीमाथि थप प्रतिबन्ध लगायो भने हामी अमेरिकाको इनसर्लिक हवाई आधारलाइ बन्द गर्न सक्छौं । ’ एर्दोगानले इनसर्लिकको अतिरिक्त मलाक्या प्रान्तको अदानामा रहेको कुरेसिच रडार स्टेशनलाई पनि बन्द गर्ने विकल्प आफूहरुसँग रहेको बताए । कुरेसिच बेसमा अमेरिकी सेनाको महत्वपूर्ण रडार छ ।..
बेइजिङ, २९ मङ्सिर चीनले आइतबारदेखि लागू हुनेगरी यसअघि प्रस्ताव गरेको अमेरिकी वस्तुमा लगाइने करवृद्धि योजना स्थगित गरेको जनाएको छ । चीन र अमेरिकाबीच जारी व्यापार युद्धमा महत्वपूर्ण प्रगति भएको घोषणा गरेसँगै चीनले यस्तो कदम चालेको हो । चीनले अमेरिकाका केही सामानको आयातमा १० प्रतिशत र ५ प्रतिशतको करवृद्धि गर्ने योजना हाललाई स्थगित गरेको छ, र “अमेरिकामा निर्मित अटो र स्पेयर पार्ट्समा थप..
प्योङयाङ, २८ मङ्सिर उत्तर कोरियाले ‘महत्वपूर्ण मिसाइल परीक्षण’ गरेको सरकारी समाचार संस्था (केसीएनए)ले शनिबार सरकारी स्रोतलाई उद्धृत गरी उल्लेख गरेको छ । उत्तर कोरियाली सोहाए परमाणु परीक्षण स्थलबाट देशको परमाणु क्षमता बिस्तार गर्ने खालको महत्वपूर्ण परीक्षण गरेको उत्तर कोरिया सरकारका प्रवक्तालाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था केसिएनएले लेखेको छ । “अर्को महत्वपूर्ण परीक्षण यही डिसेम्बर १३ गते साँझ १०ः४१ मा सुरू भै १०ः४८ बजे..
लण्डन, मंसिर २८ । बेलायतमा बिहीबार भएको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसन नेतृत्वको कन्जरभेटिभ पार्टीले अत्यधिक बहुमतका साथ जित हात पारेपछि जोन्सनले आफ्नो पार्टीको 'असाधारण' विजयले ब्रेक्जिट विवादको समाधान नजिक पुगाएको बताउँदै भने, "अब समस्याको समाधान सुरू गरौं ।" १० डाउनिङ् स्ट्रिटमा बोल्दै उनले पहिलोपटक कन्जरभेटिभलाई मतदान गर्ने लेबर पार्टीका समर्थकहरुको विश्वासलाई मर्न नदिनेसमेत बताए । अब जोनसनलाई बेलायतलाई यूरोपेली संघबाट बहिर्गमन गराउने कार्यका..
लण्डन, २७ मङ्सिर बेलायतमा कन्जभेटिभ पार्टीको जीतसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाउन शुक्रबार प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसन ‘बकिङ्गम प्यालेस’ जानुभएको छ । बिहीबार ६५० सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा जोनसनको दलले ३६४ सीट प्राप्त गर्न सफल भएको छ । जोनसनको दलको जीतले बेलायतलाई यूरोपेली संघबाट बहिर्गमन गराउने कार्यका लागि त्यहाँका जनताले फेरि एक पटक कन्जर्भेटिभ पार्टीलाई बृहत अवसर मिलेको छ । निर्वाचनमा ऐतिहासिक..
काठमाडौँ, २७ मङ्सिर बेलायतको आम निर्वाचनमा कन्जर्भेटिभ पार्टीले स्पष्ट बहुमत हासिल गरेको छ । ६ सय ४२ सिटका लागि बिहीबार भएको निर्वाचनमा पछिल्लो मतपरिणामअनुसार कन्जर्भेटिभ पार्टीले ३ सय ६२ सिट जितिसकेको छ । सदनमा स्पष्ट बहुमतका लागि ३ सय २६ सिट भए पुग्छ । प्रतिपक्षी दल लेबर पार्टीले भने २ सय ३ सिटमा जीत हासिल गरेको छ । कन्जर्भेटिभ पार्टीले पछिल्लो ३२..
काठमाडौँ, मंसिर २७ बिहीबार स्थानीय समय अनुसार बिहान ७ बजेदेखि राति १० बजे सम्म बेलालयतमा मतदान भएको थियो । मतदान सकिएलगत्तै बिबिसी–स्काई–आइटिभीले एग्जिट पोल जारी गरे । बेलालयतको आम चुनावमा कन्जर्वेटिभ पार्टीलार्ई एक पटक फेरि सत्तामै रहने अनुमान गरिएको छ। त्यस अनुसार बोरिस जानसनको कन्जर्वेटिभ पार्टीलाई पूर्ण बहुमत मिल्ने देखिएको हो । एग्जिट पोलका अनुसार ६५० सिटको संसदमा कन्जर्वेटिभलाई ३६८, लेबर पार्टीलाई १९१..
Results 1601: You are at page9of 54